admin14 – Mero Samachar
HomeAuthorPosts by: admin14
एउटा गह्रोको धान काटिसकेपछि पूर्वडीआइजी सिलवालले चुनावमा ललितपुर १ बाट आफूलाई मत दिन आग्रह गरे । जाजरकोटे राजाका सन्तान तथा चर्चित पाइलट बबी शाहका छोरा राजिवविक्रम शाह थापाथली दरबारमा जन्मिएका हुन् । उनले विश्वका महंगा स्कूल र कलेजमा पढे ।...
प्रशंग हो, प्रदेश नम्बर १ को राजधानी । हामीले एउटै दल नेकपा एमालेका फरक-फरक उम्मेदवारलाई सोध्यौं- तपाईको दलले १ नम्बर प्रदेशको राजधानी कुन ठाउँलाई बनाउने नीति लिएको छ ? जवाफमा एउटै दलका उम्मेदवारले तीनथरि कुरा सुनाएः धनकुटालाई प्रदेशको राजधानी बनाउँछुः...
यो खेल राजस्थानको जयपुरमा बुधबार खेलिएको थियो, जसमा आकाश दिशा क्रिकेट एकेडेमीको तर्फबाट खेलेका थिए । यस खेलमा दिशा क्रिकेट एकेडेमीले सुरुमा ब्याटिङ गर्दै १५६ रन बनायो । त्यसपछि १५७ रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गर्न आएको पर्ल क्रिकेट एकेडेमीलाई आकाशले...
कच्ची बाटोमा धूलो उडाउँदै हृदयेश त्रिपाठीले भने- पदमा भए पो विकास गर्नु !
२३ कात्तिक, नवलपरासी । एमालेको चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’अंकित झण्डा फरफराउँदै एक हुल गाडी धुलो उडाएर भुजहावा चोकमा आए । चोकमा गाडीहरु रोकिए । त्यसमध्ये एउटाबाट ओर्लिए हृदयेश त्रिपाठी । उनी आफ्नो सदाबहार स्टाइलमा थिए, कुर्ता पाइजामा, असकोट र बायाँ काँधमा...
सुरु भयो ‘छक्का पन्जा ३’को छायांकन, दीपिका र पुष्पल जोडिए
२ वटा सिक्वेल ब्लकबस्टर भएपछि चलचित्र ‘छक्का पन्जा’को टिमले तेश्रो सिक्वेलको छायांकन सुरु गरेको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक मन्दिरमा पूजाआजा गर्दै चलचित्रको छायांकन आजबाट सुरु गरिएको हो । यो चलचित्रको छायांकन काभ्रे, दमौली, पोखरा लगायतका स्थानमा गरिनेछ । यसपटक लोकेशनमा...
आकासिँदै एप्पल कम्पनी, बजार मूल्य १० खर्ब डलर नजिक
विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी एप्पलको शेयर मूल्य सोमबार अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुग्यो । र, यो सँगै एप्पल कम्पनीको बजार मूल्य १० खर्ब डलर नजिक पुगेको छ । बर्कशायर हाथावेको वार्षिक शेयरधनी बैठकमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा सिइओ वारेन बफेटले एप्पलको थप...
नायिका निशा अधिकारी आफ्नो गर्भवती शरीरको सामाजिक सञ्जालमा खुब प्रचारप्रसार गरिरहेकी छिन् । हालै उनले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा आफ्नो ठूलो पेटको तस्वीर पोष्ट गर्दै लामो स्टाटस पनि लेखिन् । उनले यसलाई ‘ग्रान्ड फाइनल’ शिर्षक दिएकी छिन् । निशाको स्टाटसबाट उनी...
भाइरल व्वाई अशोक दर्जीले गाएको पहिलो गीत ‘मन बिनाको धन’ यूट्यूवमा आएलगत्तै चर्चित बनेको छ । आक्रामकरुपमा भ्यूज बटुलिरहेको गीतमा लाइक र कमेन्टको बाढी नै आएको छ । गीतमा आएका प्रतिक्रियाहरुबाट दंग छन् संगीतकार टंक बुढाथोकी । आफूले सोचेभन्दा पनि...
एमाले अध्यक्ष ओलीको ब्यबहारले एकतामा शंका देखियोः देव गुरुङ
२८ वैशाख, भक्तपुर । माओवादी केन्द्रका नेता देबप्रसाद गुरुङले एमाले अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ब्यबहारका कारण एमाले-माओवादी एकतामा शंका देखिएको बताएका छन् । रफत सञ्चार क्लबमा शुक्रबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले सरकारको क्याबिनेटबाट गरिने निर्णय बाहेक सत्ता...